वाग्ले जर्नल | Wagle Street Journal
Category Archives: वाग्ले जर्नल
अनि सडक किनारमा सुतिरहेको फुच्चे बाछोको घाँटीमै किल्चेर त्यसलाई रगताम्य अवस्थामा छाडेर भाग्ने ट्याक्सी चालकलाई? तपाईंले आफ्नो छोरालाई म्याग्निफाइङ ग्लास प्रयोग गर्दै कमिला जलाइरहेको देख्नुभयो भने के त्यसले तपाईंलाई उसले फलामे डन्डीले मुसालाई तड्पाइरहेको घटना देख्दाभन्दा कम चिन्तित तुल्याउला? सर्पलाई त्यसैगरी यातना दिएको देख्दा? या उसकी दिदीलाई? Continue reading →
लामो राजनीतिक करिअर भएका ८५ वर्षो नेपाली नेता र विश्वचकित तुल्याउने व्यापारिक सफलता हासिल गरेका ५२ वर्षो अमेरिकी ढनाढ्य दुवै अब आ-आफ्नो क्षेत्रमा लगभग ‘सेरेमोनियल’ भूमिकामा हुनेछन् । कोइराला नेपालको पहिलो राष्ट्रपति हुने सम्भावना टरिसकेको छैन । उता गेट्स घोषित रूपमै कम्पनीको ‘सेरेमोनियल’ अध्यक्ष रहिरहनेछन् । Continue reading →
‘बोक्ने चलन छैन,’ हिरो होन्डा सीडी वान हन्ड्रेडका अधबैसे बाईकरले छाताबारेको मेरो प्रश्नमा भने- ‘किन बोक्नु ?’ हुन त बाईक चलाउनेले छाता किन बोकिरहनु, रेनकोट चाहिने हो । तर उनका कुरा सुन्दा लाग्थ्यो, छाता आवश्यक कुरा होइन, झन्झट हो । Continue reading →
‘ह्वाट्स अप ड्युड ?’ गुगल टकमा कसैले क्यालिफोर्नियाबाट सन्देश पठाइरहेको छ । स्क्रिनको दायाँपट्टी कुनामा निकैबेर बेसारे रङमा त्यसले पिलिकपिलिक गरेपछि मैले त्यसमा क्लिक गरेको थिएँ । मेरो नामसँगैको सांकेतिक थोप्लो ‘हरियो’ छ, अर्थात म च्याटका लागि उपलब्ध छु । मैले त्यसको रिप्लाई नगर्ने हो भने त्यो थोप्लाको रङ रातोमा बदल्नुपर्छ । तर म व्यस्त भए पो । व्यस्तै छु भने पनि त्यो इन्स्ट्यान्ट मेसेन्जरमै सीमित छ- थोप्लो मुनि ‘स्ट्याटस’ वर्णनरू लगातार बदलिइरहेका छन् । पछिल्लोले म ‘फ्रिक्ड आउट’ भएको जनाएको छ । क्यालिफोर्नियाले बितेका सात मिनेटदेखि त्यसको निरीक्षण गरिरहे जस्तो छ । Continue reading →
ओखलढुंगाको टोक्सेल गाविसका ६५ बर्षो मिनभवनमा ‘छोरा बुहारी नातीनातिनासँग डेरामा’ बस्छन् र अहिले ‘खुट्टा तान्न’ बानेश्वर चोक पुगेर फर्केका हुन् । Continue reading →
मंगलबारको प्राइमरीमा ओरेगन राज्यमा जितेपछि ओबामासँग उम्मेदवारीका लागि आवश्यक २०२६ मध्ये १९५९ प्रतिनिधि संख्या छन् । समाचार संस्था एपीअनुसार क्लिन्टनले १७७८ प्रतिनिधि जितेकी छिन् । तीनवटा राज्य पुर्टो रिको, मोन्टाना र साउथ डेकोटाले दुइ साताभित्र प्रतिनिधि चुनेपछि प्रतिस्पर्धा सकिनेछ । तर उम्मेदवारीको अन्तिम टुङ्गो लगाउन सुपर डेलिगेट्स भनिने पार्टी तर्फाट सिनेट/कंग्रेसमा चुनिएका अधिकारी तथा पार्टीदवालाहरूको भूमिका रहने निश्चित भएको छ । ७९५ सुपर डेलिगेट्समध्ये ३०६ ले ओबामालाई र्समर्थन गर्ने बताएका छन् भने २७९ ले हिलारीलाई । बाँकीले र्समर्थन र्सार्वजनिक गरेका छैनन् । Continue reading →